The Blanket gold mine is an underground gold mine located in Zimbabwe. Operated by Caledonia Mining the mine is jointly owned by Caledonia (64%) and Zimbabwean shareholders (36%). The Blanket mine began production in 1904 and was acquired by Caledonia Mining from Kinross Gold in
Gold producers restart mining in Zimbabwe GOLD NEWS . Gold producers are restarting shut mines in Zimbabwe after new rules allowed them to sell gold directly on world markets and keep the proceeds. On Feb. 2 Zimbabwe »More detailed
Prev:ball mill for mixingNext:reasonable design flotation cell
mining gold dredge for sale
small sized mining equipment elution plant machine